Dowladda Soomaaliya oo xabsi cusub ka hir-gelineysa Galmudug. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dowladda Soomaaliya oo xabsi cusub ka hir-gelineysa Galmudug.
Dowladda Soomaaliya oo xabsi cusub ka hir-gelineysa Galmudug.
Sii hayaha xilka Wasiirka Caddaaladda iyo Garsoorka Soomaaliya , Garyaqaan, Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay in ay koofurta Magaalada Gaalkacyo ka hirgelin doonaan Xabsi weyn oo casri ah, ka dib safar shaqo oo uu shalay ku gaaray halkaasi.
Previous articleAdultfriendfinder Review August 2020
Next articleCiidanka XDS oo howl-gallo qorsheysan ka fuliyay degaanno ka tirsan Gobolka Mudug.